Maakhir iyo Aqalka sare | allsanaag
Maakhir iyo Aqalka sare
Labaatan Sano iyo Ismada Maakhir
Maanta guud ahaan gobolada Soomaaliya waxa looga diyaar garoobayaa olole doorasho, oo ay xiisadda ugu weyni iyo hadal haynta ugu badani ay tahay cidda gobol walba uga mid noqonaysa Xildhibaanada Aqalka sare.
Gobolka Sanaag waa ka duwan yahay gobolada kale ee Soomaaliya , waxay u muuqataa in xildhibaanaddi ka soo bixi lahaa degmooyinka Ceerigaabo, Dhahar, Lasqoray iyo Badhan, oo ka mid ahaa degmooyinkii jiray burburkii Soomaaliya ka hor in la bililiqaystay oo la doonayo in la siiyo siyaasi ka soo jeeda beesha Isaaq .
Bulshada ku nool Gobolka Sanaag ilaa hadda lama hayo ama ma jiraan maamul la soo xiriiray, oo u sheegay inta Xildhibaan oo ay saami uga heleen aqalka sare, kaas oo lagu qaybsanyo 18kii gobol ee Soomaaliya .
Cabsida ugu weyn oo hadda muuqataa waa afarta degmo ee gobolka Sanaag iyo galbeedka gobolka Bari oo la yiraahdo hal Xildhibaan ayeey ka heleen aqalka Sare. taasina maaha mid ku timid wada tashi beeleed ee waa Xildhibaan ama Xildhibanad ku iman doonta Saaxiib, Qaraabo ama Xidid
Hadba arintan aan la qaadan karin ee ay ka heleen halka Xildhibaan ee aqalka sare reer Maakhir haddii ay dhacdo , oo sumcadda, sharaftii iyo karaamada reer Maakhir lahaaayeen lagu tunto , mustqbalkana haddii ay dhacdo in Bulshada caalamku ku khasbaan Soomaalida in loo wada hadlo Waqooyi iyo Koonfur wiiqaysa gorgortankaagii siyaadeed ee reer Maakhir golaha la iman lahaayeen . yaa qaadaya ma’suulyadeeda, oo Bulshada reer Maakhir ee hadda nool iyo jiilka soo socdaba ay ogaan doonaan cidda dhaxal wareejiyey
Arintan ma’suuliyadeeda waxay gaar u tahay oo ugu talo galay inay bulshada reer Maakhir marin habaabiyaan, waa Isimada beesha Warsangeli oo la caleemo saaray labaatankii Sano ee ina soo dhaaftay laga soo bilaabo 1997. Isimadani hal maalin kama shaqayn midnimada iyo ilaalinta sharafta umadda ay sheegtaan inay Isimo u yihiin.
Sanad ka hor bulshada reer Maakhir waxaan ugu baaqnay in iyaga oo midaysan oo gacmaha is haysta ay soo wada dhacsadaan saamiga ay Soomaali dhexdeeda ku leeyihiin sida Xildhibaanada Aqalka sare. Waxaase bedelay in iyada oo aan gacmaha waxba lagu hayn in beelihii wada dhashay shaki lagu kal dhex abuuray iyo reer hebel ayaa aqalka sare u socda. Tusaale degmada Buraaa dhowr bilood ma lahayn duq magaalo, waxaana u sabab ah khilaafka bulshada wada dhashay ee walaalaha ah la dhex dhigay iyo Quud aan la hayn oo qoryo loo soo gurtay
Maxaa la gudboon Bulshada reer Maakhir?
Labo arimood ayaa la gudboon bulshada reer Maakhir. Mid waa arinta maanta taagan u baahan in si midaysan looga hortago waxna looga qabto, taas oo ah in bulshada Reer Maakhir ayna qaadan wax ka yar labo Xildhibaan Aqalka sare . Arinta labaad oo ah in dood laga bilaabo ayaa waxay tahay caleemo saarkii Suldaan Sciid iyo Garaad Cabdulaahi Cali Ciid ay bulshada reer Maakhir u doorteen inay hogaamiyaan ma noqday mid xoojiyey midnimaddi Maakhir mise maalinba maalinta ka danbaysa reer Maakhir iyo dhashii Garaad Dhdhin waa sii degayaan oo halkii ay joogeen ayeey hoos uga sii socdaan iyaga loo adeegnayo Isimaddoda?
← Cali Xaraare iyo Ictiraafka Somaliland Xildhibaan Daahir Xaaji Geele →